အခမဲ့နေ့စဉ်အတွင်း Malatya ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[24 / 08 / 2019] အဆိုပါလက်ဝဲနောက်ဆုံးတစ်နှစ်တာ Konya YHT ဘူတာဖွင့်ပွဲ	42 Konya
Homeတူရကီအရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး44 MalatyaMalatya ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အခမဲ့နေ့စဉ်အတွင်း
09 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 44 Malatya, အရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ, ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းဘတ်စ်ကား 0
အခမဲ့လွန်းသည်မည်သည့်မနက်စောစော Al-Adha, စဉ်အတွင်းမြို့တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏ Malatya မြူနီစီပယ် (Mota) မော်တော်ယာဉ်များနိုင်ငံသားများဖြစ်သည်။
11 - ခရီးစဉ်အားလုံးလိုင်းများပေါ်တွင်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတော်မူမည်ငြိမ်းချမ်းရေးရာတွင်စည်ပင်သာယာသင်္ချိုင်းများအတွက်ရက်စွဲများ, မိတ်ဆွေများ, ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်ဘတ်စ်ကားများအကြားကျင်းပပါလိမ့်မည်သည့်အနစ်နာခံ၏သြဂုတ်လပွဲအတွက်နိုင်ငံသားများ၏ 14 2019 အိမ်ထောင်ဖက်။
Malatya မြို့တော်ဝန် Selahattin Gürkan; "အားလုံးလူမှုရေးမြို့တော်စည်ပင်ကနားလည်မှု၏ညှနျကွားထဲမှာမနက်စောစော Al-Adha စဉ်အတွင်းပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားထက်အခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်များ (ဘတ်စ်ကားနှင့် TRAMBUS ရဲ့) နိုင်ငံသားများအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသွားမှာပါဖြုန်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေမနက်စောစော Al-Adha ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းသောလမ်း၏အဘို့ဆောင်သောပွဲများအတွက်," ဟု၎င်းကပြောသည်။
ဒါ့အပြင်ဇွန်လ 10 2019 အတွက်သင်္ချိုင်း Mota မှာစနေနေ့ '' Arafa '' နေ့ကအလီဘာဘာနဲ့ Karababa သင်္ချိုင်းများကမြို့ကိုအပိုဆောင်းလေယာဉ်ထား, ထိုသင်္ချိုင်းကိုလည်းအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုသွားရောက်ကြည့်ရှုမည်သူကိုတွေ့ပါလိမ့်မည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်း Kayseri အခမဲ့နေ့ 09 / 08 / 2019 Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ın, အအနစ်နာခံ၏ပွဲအခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထုတ်ပြန်ကြေညာမည်ဖြစ်သည်။ Büyükkılıçသမ္မတ, မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဘတ်စ်ကားနှင့်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို အသုံးပြု. အခမဲ့နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်အကျိုးရှိမည်ဟုသူကဆိုသည်။ မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ın, ညဉ့်နာရီနှင့်မနက်စောစော Al-Adha ၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှပထမဦးဆုံးနေ့ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်စတင်မည်, သြဂုတ်လ 00.00 14 က xnumx't ရဲ့ဧဝကိုတစ်ရက်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမနက်စောစော Al-Adha အတွက်အလေ့အကျင့်ကိုအဆုံးသတ်သွားမည်ဟုဆိုသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Mamdouh Büyükkılıç'ın, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လွတ်လပ်သောအလေ့အကျင့်ရုံ Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဘတ်စ်ကားနှင့်ရထားလမ်းစနစ်ကပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားပေါ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်, သူကလက်ရှိလျှောက်လွှာများ၏နယ်ပယ်ကဆိုသည်။
Bursa အခမဲ့အတွက်နေ့ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်း 09 / 08 / 2019 Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas နိုင်ငံသားများသူမွို့၌ခေါ်ဆောင်သွားအားလုံးအတိုင်းအတာဟာမနက်စောစော Al-Adha ၏လုံခြုံငြိမ်းချမ်းစွာလေထုထဲတွင်အသက်ရှင်ဖို့ကပြောသည်။ Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas, Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အဆင်ပြေနိုင်ငံသားများအဖြစ် "အားလုံးမြို့ကျော်မနက်စောစော Al-Adha စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အတွေ့အကြုံဟုကျနော်တို့ယုံကြည်မှုအတွက်ငြိမ်းချမ်းပြီးမနက်စောစောဖြုန်းဖို့အလို့ငှာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူနစ်များကလိုအပ်သောအစီအမံများတယ်။ အားလပ်ရက်, စည်းလုံးမှုနှင့်အတူတကွ၏တဆေးကို။ ထိုကဲ့သို့သောရက်ပေါင်းပေါ်မှာငါတို့ခံစားချက်တွေကိုခိုင်မာညီနောင်များ, ချစ်ကြည်ရေးနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှု။ ကျနော်တို့အနစ်နာခံသင့်ရဲ့ပွဲဂုဏ်ပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bursa ၏ဤလှပသောရက်, ကျနော်တို့တိုင်းပြည်နှင့်လူသားအားလုံးကိုယူဆောင်လာရန်ဆန္ဒရှိမရှိ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ အဆိုပါရထားစနစ်များ၏နယ်နိမိတ်အတွင်း Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့် ...
Kahramanmaras အတွက်အခမဲ့ဖြတ်သန်းနေ့စဉ်အတွင်း 08 / 08 / 2019 Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကပြောသည် Kurban Bayram စဉ်အတွင်းအခမဲ့လွန်းဘတ်စ်ကားဖြင့်ကြေညာချက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ မတိုင်မှီ Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနတို့ကလာမည့်မနက်စောစော Al-Adha ကောင်းသောသတင်းရောက်လာတယ်။ ကြေညာချက်မှာတော့သတ်မှတ်ထားသောဘတ်စ်ကားစဉ်အတွင်းအနစ်နာခံ၏4နေ့ကပွဲတာဝန်ခံအခမဲ့ခရီးသည်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆင်ပြေပြေနဲ့အဆင်ပြေစီးနင်းရာတွင်နိုင်ငံသားများကိုယ်စားအလုပ်ကြေညာချက်မှတ်ချက်ချစီးကိုလည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မဆိုနှောင့်အယှက်များကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်လိုအပ်သောအစီအမံယူထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
Eskisehir နေ့များတွင်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်း 09 / 08 / 2019 မြို့ကောင်စီကတညီတညွတ်တည်းခေါ်ဆောင်သွားနှင့်အနစ်နာခံဘတ်စ်ကားနှင့်ပေါ်လာတာဟာအရင်များ၏ပွဲအဖြစ်အခမဲ့အစေခံမည်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူဿွာန်၌ရှိသကဲ့သို့Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ ထို့အပွငျကိုအလွယ်တကူပှဲသွားရောက်နိုင်ငံသားများဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်လမ်း၏ထိပ်မှာအခမဲ့ယာဉ်ရပ်နားဧရိယာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ကားပါကင်နေရာများအတွက်လုပ်စားသောက်အစားအလွယ်တကူခရီးစဉ်၏နိုင်ငံသားများဆောင်ကြဉ်းနိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါအနစ်နာခံအများအပြားယူနစ်ပွဲနှင့်အတူအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ဇူလိုင်လ၏အစည်းအဝေးတွင်တညီတညွတ်တည်းယူစီးတီးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်စည်ပင်သာယာလမ်းရထားနှင့်တာဝန်ခံအခမဲ့ဘတ်စ်ကားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်အနစ်နာခံ၏ပွဲစဉ်အတွင်းကြေညာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, နိုင်ငံသားများ ...
တူရကီအခမဲ့နေ့အတွက်အတ္တဘတ်စ်ကားစဉ်အတွင်း 04 / 07 / 2016 တူရကီနေ့အခမဲ့အတွက်အတ္တဘတ်စ်ကားစဉ်အတွင်း: တူရကီမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, ကအတ္တနှင့် AS ဿွာန်၏အစမှာအားလုံးယူနစ်အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူခဲ့ပါတယ်။ ပှဲစဉ်အတွင်းအခမဲ့စီးတူရကီ, အတ္တဘတ်စ်ကား၏, ထိုမက်ထရိုနှင့် Ankaray ပေးဆောင်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ5Başkentlilerဿွာန်ခုနှစ်, ဇူလိုင်လအတွင်းစတင်မည်ရက်ပေါင်းအတ္တဘတ်စ်ကား3မှ Ankarakart မသုံးဘဲစီးနိုင်သည်, Metro နှင့် Ankaray ပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်သွားရောက်ကာ။ အားလုံးယူနစ်နှင့်ဌာနချုပ်နှင့်အတူမြို့တော်မြူနီစီပယ်, အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းတာဝန်အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အလုပ်၏ 1537နာရီအတွင်းအကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် 24 '' အပြာရောင် Panel ကို '' အဘို့ဆောင်သောပွဲနေ့, တူရကီ၏ဆန္ဒ, တောင်းဆိုမှုများနှင့်တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိမှဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ Channel ကိုပြတ်ရွေ့သင်း၏အထွေထွေဒါရိုက်တာအဖြစ် ...
အဆိုပါနေ့စဉ်အတွင်းအခမဲ့ Egon ဘတ်စ်ကား, 16 / 06 / 2017 အဆိုပါနေ့အခမဲ့စဉ်အတွင်း Egon ဘတ်စ်ကား: တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Melih သည်မနက်စောစော Al-Fitr, အတ္တနှင့်အတူနောက်တဖန်ဘတ်စ်ကားအားဖြင့်အခမဲ့ခရီးသွားနေစဉ်အတွင်းBaşkentliler, ၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်ကိုအဆင်ပြေလမ်းအောင်သတင်းကိုပေး၏။ တူရကီအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် "ဟုအဆိုပါနေ့၏အခမဲ့ဘတ်စ်ကားခရီးစဉ်" တူရကီမြို့တော် MAG နိုင်ငံတော်သမ္မတတစ်ဦးမြှို့နယ်အဖြစ်စတင်ခဲ့ကြောင်းသတိပေး "ပှဲလယ်ပြင်၌အခမဲ့ခရီးသွား App ကိုပြည်နယ်တစ်ခုအစဉ်အလာလည်း3နေ့မနက်စောစော Al-Fitr (25 နင်္ဂနွေနေ့, ဇွန်လ, 26 တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ, 27 အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လစဉ်အတွင်း ) ကိုဆက်လက်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။ နိုင်ငံသားများ၏အဘို့ဆောင်သောပွဲ, သူတို့ကအလွယ်တကူသူတို့လိုချင်တဲ့နေရာတွေကိုအလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများမရှိဘဲအခမဲ့ On-site ကိုအတ္တဘတ်စ်ကားဟာသင်္ချိုင်းများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ...
အတ္တနေ့အခမဲ့ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုစဉ်အတွင်းတဖန် Give မှ 25 / 08 / 2017 အဆိုပါမနက်စောစော Al-Adha ပှဲမြို့တော်အတွက်အတ္တဘတ်စ်ကားစီ၌ရှိသကဲ့သို့, တာဝန်ခံအခမဲ့သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ အနစ်နာခံ၏4နေ့ကပွဲစဉ်အတွင်းAnkaralılar, ဘတ်စ်ကားနှင့်အတူ (1 စက်တင်ဘာလ, သောကြာနေ့, စနေနေ့, စက်တင်ဘာလ 2,3စက်တင်ဘာလ4စက်တင်ဘာလတနင်္ဂနွေနှင့်တနင်္လာ) တွင်အတ္တ Ankarakart မသုံးဘဲ; သင်္ချိုင်း, ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများသွားရောက်လည်ပတ်အခမဲ့လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဘတ်စ်ကားသည်တစ်နာရီအပေါ်ရပ်တန့်ယခုအချိန်တွင်အတွက်လာလတံ့သော, သူတို့သည်မိုဘိုင်းဖုန်းများမှဒေါင်းလုတ်လုပ်လျှောက်လွှာ, အင်တာနက်, အသံခေါ်ဆိုမှု, 153 တောင်းဆိုသို့မဟုတ် sms ကိုတစ်ဦးတည်းအားဖြင့်လေ့လာသင်ယူနှင့်အတူအမြဲ "အတ္တမိုဘိုင်း" လျှောက်လွှာအဖြစ်Ankaralılar။ , မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏မြို့တော်မြို့ပြင်, ဘတ်စ်ကားနှင့်အတူအတ္တ၏သင်္ချိုင်းတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဖို့လွယ်ကူစွာအတ္တ ...
ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံစဉ်အတွင်းယာဉ်ရပ်နားအများကြီးBayrampaşaနေ့အခမဲ့သူများဖြစ်ကြလိမ့်မည် 07 / 08 / 2019 Bayrampaşaအဆိုပါ IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğluအပေါ်ဘတ်စ်ကားဘူတာယာဉ်ရပ်နားအများကြီးထုတ်ပြန်ခဲ့သောမိန့်, ဖယ်ရှားခံရကြောင်းရှင်းပြ "16 မှာကြာသပတေးနေ့: ငါတို့သည်Bayrampaşaဘတ်စ်ကားဘူတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူနစ်အားလုံး၌ဖြစ်လိမ့်မည်အဖြစ် 00" ဟု၎င်းကပြောသည်။ İmamoğluအစ္စတန်ဘူလ်၏သတင်းကိုပေး၏သူအားလပ်ရက်သို့မဟုတ်ခရီးသည်စဉ်အတွင်း၎င်းတို့၏ဆွေမျိုးသားချင်းများအခမဲ့ယာဉ်ရပ်နားကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြည့်ဆည်း။ အဆိုပါတိုင်းတာမှုများဖယ်ရှားယနေ့ Ekrem İmamoğluနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုယူကြောင်းရှင်းပြဘတ်စ်ကားဘူတာရုံ၏ IMM ပဏာမမနေ့ကအတူBayrampaşaဟုသူကဆိုသည်: "မနေ့ကငါငါ့ကိုလည်းအံ့အားသင့်စေခြင်းနှင့်ငါနောင်တရမယ့်တရားစီရင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ယနေ့ IMM ၏ကျွန်တော်တို့၏တရားဝင်ဌာန၏ပဏာမခြေလှမ်းမှာကွပ်မျက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်ရပ်ဆိုင်းထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တရားရုံးမိန့်ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌အဘယ်သူမျှမအတားအဆီးလည်းမရှိ။ 16 မှာကြာသပတေးနေ့: 00 ...
Bursa အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရာခိုင်နှုန်းလျှော့နေ့ 50 စဉ်အတွင်း 29 / 05 / 2019 Bursa ရဲ့စည်ပင်သာယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီBursalılaraဿွာန်အားလုံးကိုအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ချွင်းချက်ပံ့ပိုးပေးBURULAŞ 50 ရာခိုင်နှုန်းသာမူတည်ကြောင်းလျှော့စျေးကြေညာခဲ့သည်။ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မနက်စောစော Al-Fitr တစ်လျှောက်လုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်အထူးလျှော့စျေးထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မည်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုပံ့ပိုးပေးBURULAŞပေါ်တွင်မူတည်သည်။ BURULAŞအားလပ်ရက်ရောင်းချမှုစျေးနှုန်း 50 ရာခိုင်နှုန်းခန့်အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါBURULAŞထံမှစာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ် "ဟုဒေသခံအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် 4-5-6 2019 နေ့စွဲဇွန်လ Bursa နိုင်ငံသားများ, အမနက်စောစော Al-Fitr စဉ်အတွင်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးခရီးသည်ဖို့ 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့စျေးထဲကနေအကြိုးပွုနိုငျထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်" ။
Eskisehir အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မနက်စောစော Al-Fitr စဉ်အတွင်း 17 / 05 / 2019 Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်မနက်စောစော Al-Fitr စဉ်အတွင်းတညီတညွတ်တည်းမဲများကခေါ်ဆောင်သွားဆုံးဖြတ်ချက်များကိုများ၏စည်ပင်သာယာညီလာခံကလမ်းရထားနှင့်တာဝန်ခံအခမဲ့ဘတ်စ်ကားအဖြစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ မြို့တော်လမ်းရထားနှင့်ဘတ်စ်ကား၏မြူနီစီပယ်အတွက်3ရက်ပေါင်းအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူEskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကောင်စီထဲမှာအငြိမ့်ဖြည့်ဆည်းဖို့နိုင်ငံသားတွေပှဲသို့သွားရောက်တာဝန်ခံ၏အခမဲ့အစေခံပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Malatya ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေ့အခမဲ့စဉ်အတွင်း
Izmir ရဲ့ Cigli ခရိုင်ဓါတ်ရထားလာ
အဆိုပါနေ့စဉ်အတွင်းအခမဲ့ Egon ဘတ်စ်ကား,
အတ္တနေ့အခမဲ့ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုစဉ်အတွင်းတဖန် Give မှ
Bursa အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရာခိုင်နှုန်းလျှော့နေ့ 50 စဉ်အတွင်း
Eskisehir အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မနက်စောစော Al-Fitr စဉ်အတွင်း
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (365) ဇူလိုင်လ 2019 (637) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (544) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (494) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)